Iinkqubo zombane zivela kuzo zonke iinkalo zobomi bethu, ezinje nge: isibane esisulungekileyo sokuhlanjululwa, isibane sokucoca isilingi, isibane sokucoca isibhengezo, intsimbi engenasici isibane se-germicidal, isibane se-aluminium alloy induction nokunye …… Zeziphi iindlela zokufakelwa kwezibane zokucoca ? 1. ...
Ukuphuhliswa kwetekhnoloji yegumbi ecocekileyo
Igumbi elicocekileyo libhekisa ekususweni kwamasuntswana, umoya onobungozi, iintsholongwane kunye nezinye izinto ezingcolisa umoya ngaphakathi kwisithuba esithile, kunye nolawulo lobushushu ngaphakathi, ucoceko, uxinzelelo lwangaphakathi, isantya somoya kunye nokusasazwa komoya, ingxolo, ukungcangcazela, ukukhanya kunye no-static Umbane ngaphakathi ...
I-2018 yasentwasahlobo Chongqing oomatshini ovezayo oomatshini uyakwamkela ngobubele.
I-55th China umatshini wamayeza oxuba amayeza （intwasahlobo enobulungisa） iya kubanjelwa eChongqing iziko lemiboniso yamazwe aphesheya ukusukela nge-20 ka-Epreli, 2018 ukuya kwi-22 ngo-Epreli, 2018. Ukusukela oko yasekwa ngo-1991, umboniso wesizwe oomatshini oxuba amayeza uye waba ngumboniso omkhulu ...
Abamenyiweyo ngokukodwa: UNjingalwazi Zhang liqun nguMcebisi Jikelele wezoBugcisa kwiNkampani yethu
I-19 CPC National Congress yabanjwa ngempumelelo ekwindla ngo-Okthobha. I-China kwakhona yabeka isikhephe ngenqanawa entsha kunye nohambo olutsha. Kukwakho iqela labantu elinde ukufika kukaNjingalwazi Zhang liqun, ngubani inkosi yeshishini lokuhlanjululwa, kwimbumba entle ...
TekMax Technology Inkampani yazisa "Six Sigma" njengoqeqesho kwinkampani yethu
Ukuze kuphuculwe umgangatho wemigangatho yolawulo kunye neenkqubo zokusebenza kwenkampani yethu, sazise ubuchule benkqubo yolawulo lomgangatho "Six Sigma". Inkampani yethu iqale uqeqesho lwenkqubo yeentsuku ezilishumi lweprojekthi ye-Six Sigma ukusukela ngo-Epreli 2017, zizonke zoqeqesho ezine. Th ...
Ukuphucula ulawulo, kunye nokudala iqela leqela
I-TekMax ilungelelanise abasebenzi ukuba bafunde inkqubo entsha yolawulo lomgangatho we-ISO 9000.9001 Ukususela nge-4 Septemba, 2017 ukuya kwi-7 Septemba, 2017 Dalian TekMax Technology Co., Ltd Utitshala u-Hewei ovela eShenzhen Bonke abasebenzi base-Dalian TekMax Uqeqesho lwenkqubo yolawulo lomgangatho Nawuphi na umbutho ufuna i-quali ...
Igumbi lokucoca umoya ococekileyo, Inkqubo yaManzi aBandayo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Ifestile yegumbi elicocekileyo, Igumbi elicocekileyo, Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi,